Miampy milina fanjairana, ny tsara indrindra ary misy tolotra tsy azo toherina
Miampy milina fanjairana
Mahasarika olona hatrany ny tontolon’ny fanjairana. Ny fahafahana manao fanovana sasany amin'ny akanjo na, amin'ny fampitomboana ny endrikao manokana dia zavatra maharesy lahatra foana. Noho izany, maro no manapa-kevitra ny hividy ny azy isan'andro milina fanjairana voalohany. Ny hafa dia mila mandroso kely ary noho izany dia mila milina mifanaraka amin'ny filany ihany koa izy ireo.
Raha te hahita izay mety ho safidinao tsara indrindra ianao, dia aza adino ny zava-drehetra lazainay aminao anio. Avy amin'ny milina fanjairana mora indrindra sy mora indrindra ho an'ny vao manomboka, overlock na ny matihanina sy indostrialy indrindra. Iza amin'ireo no hofidinao?
milina fanjairana hanomboka
Raha mitady iray ianao milina fanjairana hanomboka, eto ambany ianao dia hahita modely efatra izay mety ho an'ny vao manomboka na asa tsotra:
modely endri-javatra vidiny
Fampanantenana mpihira 1412
- Karazana zaitra: 12
-Hanjaitra ny halavany sy ny sakany: azo amboarina
-4-dingana bokotra automatique
- Ny endri-javatra hafa: famolavolana compact, seams fanamafisana, zig-zag 133,24 €
Jereo tolotraFanamarihana: 9 / 10
Mpihira 2263 Fomban-drazana
- Karazana zaitra: 16
-Hava sy sakany zaitra: azo amboarina hatramin'ny 4 sy 5 mm tsirairay avy
-Botom-bolo mandeha ho azy 4 dingana
-Endri-javatra hafa: fanjairana mahitsy sy zig-zag, kojakoja, tongotra presser 137,75 €
- Karazana zaitra: 31
-Hanjaitra ny halavany sy ny sakany: azo amboarina hatramin'ny 5 mm
-Endri-javatra hafa: LED, tongotra azo amboarina, fitoeran'ny spool metaly 189,99 €
Jereo tolotraFanamarihana: 10 / 10
- Karazana zaitra: 40
- 5 lavaka automatique, dingana 1
-Endri-javatra hafa: miasa ho an'ny patchwork sy quilting 171,31 €
Na dia tsy ao amin'ny tabilao etsy ambony aza izany, dia tsy azonao atao koa ny mamela ny Masinina fanjairana, maodely mahafinaritra hatomboka saingy voafetra amin'ny tahiry fivarotana lehibe ny fisiany.
Ho marina ianao amin'ny iray amin'ireo modely eo amin'ny latabatra, fa raha te hahalala bebe kokoa momba ny tsirairay amin'izy ireo ianao, eto ambany dia holazainay aminao ny toetra fototry ny tsirairay amin'ireo milina fanjairana izay nanjary safidy tonga lafatra ho an'ireo izay te-hanomboka amin'ny tontolon'ny fanjairana na ho an'ireo izay mitady safidy tsara kalitao:
Machine Fampanantenana mpihira...
Raha mitady milina fanjairana fototra ianao izay manana endri-javatra manan-danja hanombohana anao, ny Masinina mpanjaitra mpihira Ny fampanantenana 1412 dia ho anao. Raha mikasa ny hanao ny asa mora kokoa toy ny hemming na zipping, ary koa ny bokotra, dia ho tonga lafatra ho anao. Ankoatra izany, dia milina kalitao amin'ny vidiny tsara. Tsotra ny fampiasana azy ary araka ny lazaintsika dia mety tsara raha vao manomboka ianao. Na dia manana zaitra 12 samihafa aza izy, dia tsy maintsy ampiana festoons haingon-trano.
Ny vidiny matetika dia manodidina 115 euros ary mety ho anao eto.
Mpihira 2250 Fomban-drazana
Fomban-drazana mpihira 2250 -...
Izy io dia iray amin'ny milina fanjairana lafo indrindra, noho izany, efa manana data tsara mialoha isika. Manana asa maro izy io ary tena ilaina rehefa manomboka eo amin'ny tontolon'ny fanjairana. Ankoatra izany, tsy izany ihany, satria miaraka amin'ny totalin'ny 10 stitches dia ho tonga lafatra ihany koa rehefa efa manana ny fototra. Noho izany, tsy ho fohy ianao. Iray amin'ireo maivana indrindra izy io, ka azonao atao ny mitondra azy araka izay ilainao.
Manodidina ny eo ho eo ny vidin'ity milina fanjairana ity hanombohana 138 euros y azonao atao ny mividy azy eto
milina fanjairana ALFA,...
Ny iray amin'ireo milina tena ilaina dia ny Alfa Style 40. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria tena tsotra, ho an'ireo rehetra izay zara raha manana hevitra momba ny fanjairana. Inona koa, ny asany dia tena feno toy ny automatique threader, buttonhole in 4 dingana. Izy io koa dia manana jiro LED, ary koa lelany hanapahana ny kofehy. Tadidio fa misy zaitra 12 miampy scallops haingon-trano roa. Inona no ho fototra ho an'ny asa mahazatra indrindra.
Amin'ity tranga ity, ny vidiny dia miakatra eo amin'ny 180 euros eo ho eo. Vidio eto.
Rahalahy CS10 Machine...
Raha te hampahery ny tenanao amin'ny voalohany ianao milina fanjairana elektronika, ity no modely tsara indrindra ho anao. Tsy noho izy elektronika dia sarotra ny mampiasa, mifanohitra amin'izany. Ho fanampin'ny zaitra fototra indrindra, azonao atao ihany koa ny manomboka ny dingana voalohany amin'ny tontolon'ny ampiasain'ireo ary koa ny quilting. Tsotra ny fampiasana azy toy ny fisafidianana ny asa izay hataontsika, ny halavany sy ny sakan'ny zaitra tsirairay ary izay ihany.
Ny tsara dia ny hoe rehefa mahay miasa amin'ny tsotra indrindra, dia mamela anao ihany koa ny handeha lavidavitra kokoa, noho ny fahafenoan'ny. Izany rehetra izany amin'ny vidiny eo ho eo 165 euros. Raha tianao dia azonao atao mividy eto.
Raha te hahita modely bebe kokoa amin'ny milina fanjairana rahalahy, ampidiro ny rohy izay navelanay fotsiny.
milina fanjairana mora
Raha izay tadiavinao no safidy mora indrindra amin'ny rehetra, dia manana ianao milina fanjairana mora indrindra na dia nisafidy modely sasany manana sanda lehibe amin'ny vola aza izahay:
- Karazana zaitra: 13
-Hanjaitra sy sakany: Tsy azo amboarina
- 4 tsipìka grommet
-Endri-javatra hafa: Double fanjaitra 115,36 €
- Karazana zaitra: 17
-Hanjaitra sy sakany: 2 refy
-Endri-javatra hafa: Mihodinkodina mandeha ho azy, maivana, sandry malalaka Tsy misy vokatra.
- Karazana zaitra: 21
-Botonontona mandeha ho azy in-1
-Endri-javatra hafa: maivana, sandry maimaim-poana, threader mandeha ho azy 179,99 €
Jereo tolotraFanamarihana: 9/10
- Karazana zaitra: 25
-Botom-bolo mandeha ho azy 1 dingana
-Endri-javatra hafa: mahatohitra, mora ny kofehy 232,99 €
Miatrika ny iray amin'ireo milina fanjairana mora indrindra isika. Ny Jata MC695 dia manana karazana zaitra 13. Tena milina tena mora ampiasaina sy maivana rehefa entina. Manana kojakoja maro izy io, ary koa hazavana mitambatra. Tonga lafatra ho an'ireo izay manomboka fa koa ho an'ireo izay efa maniry zavatra bebe kokoa. Angamba ny teboka ratsy dia ny halavany sy ny sakan'ny stitch dia tsy azo amboarina.
Ny vidiny dia tsy azo toherina ary mety ho anao 113 euros. tianao ve izy Vidio eto
milina fanjairana mpihira...
Iray amin'ireo safidy tsara indrindra izy io. Ny hevitra dia miombon-kevitra fa milina fanjairana ny fanombohana, fa koa ho an'ny olona mila zavatra bebe kokoa ao anatin'ny fotoana fohy. Noho izany, raha afaka mampiasa vola bebe kokoa ianao, ity no modelyo. Izy io dia manana zaitra 21 miaraka amin'ny regulator ny halavany sy ny sakany. Inona koa, dia hanome zaitra 750 isa-minitra, sandry malalaka sy hazavana mitambatra.
Amin'ity tranga ity, miloka amin'ny sanda lehibe amin'ny vola izahay ary izany dia na dia tsy mora toy ireo modely roa teo aloha aza, ny Singer Simple dia modely fidirana mahafinaritra izay mety ho anao amin'ny 158 euros ary azonao atao. mividy eto.
ALFA Lohataona 40+ manaraka ...
Iray amin'ireo milina fanjairana manana kalitao avo lenta ity. A new version of the Masinina fanjairana alfa Manaraka. Maro ny modely amin'ity sehatra ity izay manana toetra mitovy. Fa amin'ity tranga ity dia tavela miaraka amin'ny Alfa Next 45 isika. Mety ho an'ireo vao manomboka na ho an'ireo izay maniry ny haharitra ela kokoa ny milina fanjairana voalohany. Miaraka amin'ny zaitra 25 sy scallops haingon-trano 4Hanatanteraka ny andrasanao izy ireo.
Ny Alfa Next 45 dia modely misy vidiny manodidina ny 225 euro ary inona no azonao atao mividy eto. Voafetra ny fahafahan'izy ireo ka raha tsy manana tahiry izy ireo rehefa mividy izany dia azonao atao ny mividy ny modely avy amin'ny fianakaviana Next satria mitovy amin'ny endri-javatra izy ireo.
Toyota SPB15 - Masinina...
Ny iray amin'ireo safidy mora indrindra dia ity. ny milina fanjairana toyota SPB15 Iray amin'ireo safidy lehibe izany. Izy io dia matevina, tsotra ary misy karazana zaitra 15. Anisan'izany, dia manasongadina karazana haingon-trano 4, stitch morontsiraka ary koa zig-zag. Izy io koa dia manana lever recoil tena ilaina.
Ny vidin'ny milina fanjairana Toyota SPB15 dia 112 euros fotsiny ary azonao atao mividy eto.
milina fanjairana matihanina
Raha izay tadiavinao dia a milina fanjairana matihanina, eto ambany dia manolotra anao ny sasany amin'ireo modely feno indrindra ho an'ireo izay mitady tombontsoa sy asa tsara kokoa:
- Karazana zaitra: 197
- 7 eyelets 1 dingana
-Endri-javatra hafa: Quilting, Patchwork, toerana fanjaitra 15 349,99 €
- Karazana zaitra: 225
- 6 eyelets 1 isa
-Endri-javatra hafa: lamina abidy, kofehy marani-tsaina Tsy misy vidiny
Jereo tolotraFanamarihana: 8 / 10
Mpihira Starlet 6699
- Karazana zaitra: 100
- 6 eyelets 1 dingana
-Endri-javatra hafa: toerana fanjaitra 12, rafitra metaly 279,99 €
Mpihira Quantum Stylist 9960
- Karazana zaitra: 600
- 13 eyelets 1 dingana
-Endri-javatra hafa: jiro LED 2, toeran'ny fanjaitra 26 749,00 €
- Karazana zaitra: 60
Endri-javatra hafa: fampisehoana LCD, tongotra presser avo roa heny 649,00 €
Rehefa miresaka momba ny milina fanjairana matihanina isika, dia mazava fa efa miresaka momba ny teny lehibe kokoa isika. Fampiasa bebe kokoa ho an'ny mamita asa toy ny matihanina. Amin'ity tranga ity, ny Bernett Sew&Go 8 dia mamela antsika amin'ny fitambarany 197. Ny 58 amin'ireo dia haingo. Hahita toeran'ny fanjaitra 15 sy avo roa heny amin'ny tongotra mpanao fanaovan-gazety koa ianao. Tena mahatohitra ary manana sandry malalaka.
Ny vidin'ity milina fanjairana matihanina ity dia 399 euros ary azonao atao mividy eto.
Tsy isalasalana fa miatrika safidy iray hafa tsara indrindra isika. Alohan'ny marika iray izay fantatsika rehetra ary mampiseho antsika ny safidy tsara indrindra. Raha izany dia, dia mitambatra amin'ny fitambaran'ny 225 zaitra. Mazava ho azy fa misaotra an'izany azonao avela hanidina ny eritreritrao. Fanampin'izany, manana lamina izy io, miaraka amin'ny halavany sy ny sakany azo amboarina ary miaraka amin'ny rafitra miolikolika mandeha ho azy. Fanjaitra indroa sy lavaka bokotra fito… inona indray no angatahintsika?
Raha liana ianao dia afaka mividy ny Singer Curvy eto.
Efa nanomboka tamin'ny fitambarany 100 izahay. Noho izany, efa afaka mahazo hevitra isika fa milina iray hafa mamela antsika handroso amin'ny fotoana rehetra tiantsika. Ny halavany sy ny sakany dia azo amboarina. Ankoatra izany, dia tokony ho lazaina fa manana Toerana fanjaitra 12 ary koa sandry maimaim-poana sy jiro LED. Na dia ny lamba matevina indrindra aza dia tsy hahatohitra izany.
Na dia milina fanjairana matihanina aza, ny Singer Starlet 6699 dia mety ho anao irery ihany 295 euros. Tianao ve izany? vidio eto
Mpihira Quantum Stylist...
Mazava ho azy fa raha miresaka momba ny milina fanjairana matihanina isika, dia tsy afaka manadino ny Singer Quantum Stylist 9960. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo izay rehetra ao an-tsainao no hampiharina. Manana karazana zaitra 600 izy io, na ny lavany na ny sakany dia azo amboarina. Afaka milaza isika fa izany no izy iray amin'ireo mahery indrindra eny an-tsena.
Ny vidiny dia 699 euros fa ho setrin'izany dia hahazo iray amin'ireo milina fanjairana tsara indrindra eny an-tsena izahay ary azonao vidiana avy eto.
Alfa Model 2160-Masinina...
Tavela miaraka amin'ny maodely milina Alfa manana toetra tonga lafatra isika, miaraka amin'ny efijery LCD izay tena mora ampiasaina. Ho koa tonga lafatra amin'ny lamba matevina kokoa, mba hahafahanao manao asa samihafa miaraka amin'ny vokatra tsara indrindra. Threader mandeha ho azy, ary koa ny 60 stitches sy fito karazana bokotra.
Ny vidin'ity milina fanjairana matihanina ity dia 518 euros ary azonao atao mividy eto.
Ahoana no mifidy ny milina fanjairana voalohany
Mety tsy ho asa mora ny fisafidianana ny milina fanjairako voalohany. Isika rehetra dia mieritreritra milina tsara sy mahatohitra izay mahavita asa miaraka amin'ny famaranana tsara. Fa ankoatra an'io dia misy pitsopitsony hafa tokony hodinihina.
Inona no hampiasaintsika azy?
Na dia mety ho iray amin'ireo fanontaniana miverimberina indrindra aza izany, dia tena ilaina izany. Raha hampiasa izany ho an'ny asa fototra indrindra ianao, dia tsy mendrika ny handany betsaka amin'ny milina matihanina kokoa. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria tsy hampiasa ny antsasaky ny asany ianao. Ankehitriny, raha tianao ny tontolon'ny fanjairana, aza mividy milina tena fototra. Ny tsara indrindra dia ny antonony, manana fiasa maromaro ary mamela antsika handroso kely. Raha tsy izany, ao anatin'ny fotoana fohy dia ho lany andro amin'ny filantsika.
Ary aza manahy raha tsy hainao ny fomba hiatrehana izany amin'ny voalohany, eto ianao dia afaka mianatra manjaitra tena tsotra sy mazava.
Inona no endri-javatra tokony hanana ny milina fanjairana voalohany?
karazana zaitra: Anisan'ny tokony hodinihina ny zaitra. Ho an'ny asa tena fototra, milina vitsy no ho tonga lafatra. Raha tsy izany dia fidio ireo manana zaitra be indrindra. Zava-dehibe ny halavan'ny stitch rehefa miasa amin'ny lamba matevina kokoa. Noho izany dia mila zaitra lava kokoa isika. Zava-dehibe koa ny sakan'ny zaitra raha hanao asa toy ny asio fehin-kibo elastika na tondraka.
eyelet: Misy fahasamihafana kely eo amin'izy ireo. Mazava ho azy fa tsy mitovy amin'ny fanaovana iray ny fanaovana bokotra amin'ny dingana efatra. Misy zavatra tokony hotadidina satria amin'ity antsipiriany ity dia afaka manao lavaka bokotra isan-karazany amin'ny akanjo.
toerana fanjaitra: Arakaraka ny toerana ananan'ny milina fanjairana no betsaka kokoa ny safidy ho azontsika rehefa misafidy karazana fanjairana.
marika milina: Amin'ny ankapobeny, tsara kokoa hatrany ny mametraka ny fitokiana amin'ireo marika malaza kokoa. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria fantatsika fa ny toetra tsara no karamantsika. Ho fanampin'izay, hanana serivisy ara-teknika bebe kokoa eo am-pelatanana ary koa ny ampahany samihafa ilaintsika.
Potencia: Marihina fa ny milina manana hery latsaky ny 75W dia tsy mety amin'ny fanjairana lamba matevina.
Tsarovy fa manana tombony maro ny milina fanjairana. Ny iray amin'ireo lehibe indrindra dia afaka mitahiry euros vitsivitsy amin'ny akanjo. Azo antoka fa ho kivy ianao rehefa very akanjo vaovao ny ankizy na rehefa mandeha any amin'ny fivarotana ianao ka tsy mahita na inona na inona mifanaraka amin'ny filanao. Ankehitriny dia afaka manova izany rehetra izany ianao, miaraka amin'ny faharetana kely sy ny fanoloran-tena. Azo antoka:
Amin'ireny tranga ireny, aza avela ho variana amin'ny milina fanjairana taloha satria sarotra kokoa ny mitantana azy ireo ary ankehitriny izy ireo dia ampiasaina ho singa haingon-trano kokoa noho ny zavatra hafa rehetra. Raha olana aminao ny teti-bola, dia azonao atao ny mividy foana milina fanjairana tanana faharoa.
milina fanjairana an-trano vs milina fanjairana indostrialy
Fantatrao ve ny tena ny fahasamihafana eo amin'ny milina fanjairana ao an-trano sy ny milina fanjairana indostrialyazy? Tsy isalasalana fa iray amin'ireo antsipiriany tokony ho fantatrao alohan'ny hanombohanao hividianana ny iray amin'izy roa. Eto indray dia misy antony maromaro tokony ho fantatrao.
milina fanjairana an-trano
Araka ny anarany, ny milina fanjairana ao an-trano no iray izay manana asa fototra ho an'ny asa mahazatra indrindra. Anisan'izany ny asa fanjairana izay fantatsika rehetra. Manaova akanjo sasany, manjaitra ranomaso, seam na zipper.
milina fanjairana indostrialy
Izy ireo dia natao ho an'ny asa mavesatra indrindra. Miantoka ny sasany izy ireo asa matihanina kokoa ary miaraka amin'ny seams mahatohitra kokoa. Ny upholstery na tady dia tonga lafatra amin'ity karazana milina ity. Zavatra tsy azo eritreretina amin'ireo namany. Ankoatra izany rehetra izany dia tsy maintsy lazaina fa rehefa mila milina toy izany isika dia satria manana asa goavana isan'andro isika ary efa manana traikefa bebe kokoa amin'ny tontolon'ny fanjairana. Izy ireo dia natao hiasa amin'ny lamba be dia be ary tsy ho ao amin'ny orinasa ihany, fa ho an'ny trano ihany koa.
Izy ireo dia manome antsika hafainganam-pandeha eo anelanelan'ny 1000 sy 1500 isa-minitra, mazava ho azy fa misy lafiny ratsy ihany koa. Handaniana angovo bebe kokoa noho ny milina mahazatra izy io ary afaka mitabataba kokoa noho ny hafa izy ireo.
Aiza no hividianana milina fanjairana
Manana toerana maromaro hividianana milina fanjairana isika ankehitriny. Amin'ny lafiny iray, manana ny fivarotana lehibe, hypermarkets ary koa fivarotana izay ahafahanao mahita vokatra hafa ho an'ny trano ihany koa. Mazava ho azy, ho fanampin'izany, manana ny teboka ofisialy izay maneho ny marika tsirairay amin'ny milina ianao.
Fa raha tsy te handany ora maro avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa ianao, ny fivarotana an-tserasera dia iray amin'ireo safidy manokana indrindra. Pejy toy ny Amazon Manana karazana modely rehetra izy ireo., ary koa miaraka amin'ireo endri-javatra voafaritra tsara sy ny vidiny somary mifaninana. Raha ny marina, afaka mitahiry euros vitsivitsy ianao raha oharina amin'ny fivarotana ara-batana.
Ny milina fanjairana rehetra dia misy kojakoja maro be. Mazava ho azy fa mety miankina amin'ny karazana modely izany. Na izany aza, ny piesy dia iray amin'ireo fototry ny fividiananay. Rehefa mividy azy ireo, raha mbola mijery ny famaritana ny milinanao. Any izy ireo dia hilaza aminao hoe inona no karazana manokana ilainao na, raha manohana ny universal.
Ho hitantsika manaraka ny fitaovana fanjairana mahazatra indrindra:
Na dia mihevitra aza izahay fa hanampy anay amin'ny kofehy anananay izany, dia tsy ampy velively izany. Indraindray, mila loko bebe kokoa isika, ho an'ny safidy tany am-boalohany tonga ao an-tsaina. Tadidio fa tena ilaina ny manana kofehy polyester ary koa amboradara. Ao amin'ny fivarotana hividiananao ilay milina dia hanana azy ireo eo am-pelatananao ihany koa izy ireo.
Na dia efa manana azy ireo aza ny milina maro, dia ilaina ny mandinika azy ireo. Misaotra azy ireo, afaka manao karazana seams ianao. Tsy afaka ny tsy misy azy ireo ianao!
Raha fototra ny tongotra fanerena na ny kofehy, ahoana ny amin'ny fanjaitra? Ny sasany dia tonga miaraka amin'ny milinanay, saingy tadidio fa ny sasany dia mety ho very eny an-dalana. Koa manana eo am-pelatanana foana fanjaitra maromaro. Tsara ny misafidy fanjaitra ho an'ny lamba maro samihafa Ary kalitao tsara.
Miaraka amin'ny bobbins, tsara indrindra ny mitady tranga. Amin'izay dia tsy ho diso ianao. Aleo manana 12 na 15 eo ho eo. Ataovy ao an-tsaina izany!
Accessories ao anaty fonosana
Raha hitanao fa tsy te hanana ireo kojakoja ireo ianao dia afaka mividy foana ilay antsoina hoe fonosana. Ao anatin'izany dia ho hitanao ny tena ilaina ankoatra ny hety sasany amin'ny modely samihafa mifanaraka amin'ny asantsika. Azonao atao koa ny tsy manadino ny mpanapaka sy ny kasety mba handrefesana.
23 hevitra momba ny «»
31 Jolay 2018 amin'ny 6:34 hariva
Misalasala aho eo amin'ny rahalahy cs10, rahalahy fs40, mpihira 6699, alfa comoakt 500
31 Jolay 2018 amin'ny 6:35 hariva
Iza no ho feno indrindra?
1 Aogositra 2018 amin'ny 9:35 maraina
Ho an'ny sandan'ny vola, ny Singer Scarlet 6699 no mpandresy. Raha tianao ny feno indrindra dia ny Compat 500E Plus fa ny vidiny dia ambony lavitra.
2 Janoary 2019 amin'ny 1:43 hariva
Salama tratry ny taona e!!
Tiako ny manampy ahy azafady, manana zanakavavy 8 taona aho izay tia lamaody sy mamolavola akanjo hatramin'ny fahazazany, dia zavatra avy amin'ny maha-izy azy izany, ny fitiavany azy, andro vitsy lasa izay dia hitako ny milina fanjairana lidl eo amin'ny 78 euros eo ho eo na mens tsy tadidiko tsara, ny olana dia io no farany ary tsy resy lahatra aho hividy azy noho ny antsipiriany kely.
Tsy hoe te handany vola be aho fa eny, tsy te hividy zavatra izay manasarotra ny fitadiavana kojakoja sns aho any aoriana any, satria any amin'ny Nosy Canary izahay no mipetraka ary miadana kokoa ny zava-drehetra. Nahafantatra an'i Singer aho nandritra ny androm-piainako, nisy foana tao an-tranoko, ary tiako ny hanana iray tsara amin'ny kalitao sy ny vidiny ary very aho na Singer na hafa no atoronao. Tianay ny hampiasa azy io hianarana sy haharitra elaela eo am-pandrosoanay, afaka manampy ahy ve ianao ary manoro hevitra azafady.
2 Janoary 2019 amin'ny 2:56 hariva
Araka ny voalazanao, ny modely arosoko indrindra dia ny Singer Promise, milina fanjairana tsotra nefa azo ianteherana mora ampiasaina ary ahafahan'ny zanakao vavy hampivelatra ny fahaizany eo amin'ny tontolon'ny fanjairana.
Rehefa mahazo traikefa ianao, dia ho afaka hanao ny mitsambikina amin'ny modely feno kokoa, fa amin'ny voalohany, ity no safidy tsara indrindra tsy isalasalana, ary amidy ihany koa izy io.
Hampiakatra ny fanafody
22 Febroary 2019 amin'ny 3:41 hariva
Bonjour, efa nisy milina fanjairana hatrizay aho fa izao te hanjaitra zavatra hafa dia tsy mamaly ahy ny iray. Efa nahita be aho tao amin'ny Internet fa tsy afaka manapa-kevitra aho. Mila ny fanampianao aho. momba ny Rahalahy cx 7o, na Mpihira STARLEYT 6699. .misaotra indrindra
Iza amin'izy roa no manjaitra ny teboka tsara kokoa?
1 martsa 2019 amin'ny 10:04 maraina
Amin'ireo modely atolotrao dia samy safidy tsara avokoa, saika matihanina. Ny milina Singer dia feno kokoa satria manana zaitra maro kokoa (100 vs. 70).
Raha ny Rahalahy CX70PE dia modely miompana kokoa amin'ny Patchwork ary eo amin'ny 50 euros eo ho eo ihany koa mora kokoa noho ny Singer, ka raha mahafeno ny filanao amin'ity maodely ity ianao dia safidy tsara hafa.
9 aprily 2019 tamin'ny 9:10 maraina
Mitady milina fanjairana portable haingana aho satria efa zatra manjaitra miaraka amin'ny alfa sy refrey matihanina taloha an'ny reniko ary tena miadana ny hitako tamin'ny mpiara-miasa.
Mila fanjairana mahazatra aho fa matanjaka ihany koa afaka manjaitra akora matevina toy ny leatherette. Manodidina ny €200-400 ny tetibolako. Betsaka ny marika sy hevitra maro ka tsy haiko hoe aiza no hanombohana. Anisan'ireo no manoro hevitra ahy ianao amin'ny fiheverana fa mitady ny hafainganam-pandeha, ny tanjaka ary ny fahaiza-manao aho.
9 aprily 2019 tamin'ny 10:47 maraina
Araka ny lazainao anay dia modely azo ampifanarahana amin'izay tadiavinao ny Singer Heavy Duty 4432. Izy io dia milina matanjaka (metaly misy takela-by ny vatany), haingana (zaitra 1100 isa-minitra) ary maro karazana. (afaka manjaitra ny karazana lamba rehetra ianao ary misy karazany 32).
Ny tsara indrindra dia mifanaraka tsara amin'ny teti-bolanao izany.
16 aprily 2019 tamin'ny 9:55 maraina
Salama maraina, liana amin'ny fividianana milina fanjairana vaovao aho, satria ny iray izay ananako dia tsy ampy hery misintona sy avo roa heny amin'ny tongotra presser. Ambonin'ny zava-drehetra dia manjaitra kasety nylon aho miaraka amin'ny lamba landihazo, misy faritra tsy maintsy manjaitra nylon matevina sy landihazo 2. Miaraka amin'ny milina izay manana mpihira aho ankehitriny, izay miasa tsara ho ahy, saingy tsy ampy hery misintona aho. Inona ny milina atolotrao?
22 aprily 2019 tamin'ny 11:20 maraina
Manao ahoana ny herinao amin'izao fotoana izao? Jereo ny Singer Heavy Duty mba hahitana raha mifanaraka amin'ny filanao.
25 aprily 2019 amin'ny 1:44 hariva
Bonjour, manana ny serenade mpihira novidiko secondhand aho ary efa tafiditra eto amin'ity izao tontolo izao ity aho dia mila zavatra bebe kokoa, indrindra ho an'ny lamba matanjaka kokoa sy hanao zavatra bebe kokoa, inona no torohevitrao ahy, nijery ny alpha aho fa tiako ny fahamarinana, fa tiako ho fantatra ny torohevitrao.
26 aprily 2019 tamin'ny 11:00 maraina
Raha tsy fantatrao hoe inona ny teti-bolanao, sarotra ny manoro anao satria midadasika be ny safidy ary saika ny modely €150 rehetra dia efa ambony noho ny milina misy anao ankehitriny. Saingy mila mahafantatra aho raha te handany €150, €200 na €400 ianao mba hanomezana anao ny fifantenana ny modely milina fanjairana tsara indrindra araka ny filanao.
Miaraka amin'ny fampahalalana nomenao anay, ny hany azoko eritreretina dia ny manoro ny Singer Heavy Duty mba hanjaitra ireo lamba matanjaka kokoa ireo.
2 Mey 2019 amin'ny 1:04 hariva
Te hanome milina fanjairana ny sipako aho amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany. Nanaraka fanjairana, famolavolana lamaody ary taranja hafa izy nandritra ny taona maro, saingy tsy fantatro ny momba ity tontolon'ny milina fanjairana ity. Mila izany izy mba hanaovana ny akanjony manokana sy handikana ny heviny sy ny kisarisany ho zavatra azo tsapain-tanana. Tiako ho zavatra ara-tontolo iainana ihany koa izy io, izay tsy maneho firy amin'ny fanjifana herinaratra. Inona no milina atolotrao?
Misaotra betsaka amin'ny fanampianao!
3 Mey 2019 amin'ny 10:04 maraina
Raha tsy mahafantatra ny teti-bolanao dia sarotra ho anay ny manolotra milina fanjairana.
Eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana, samy mandany hazavana mitovy amin'ny ankamaroan'ny tranga izy ireo. Na izany na tsy izany, dia ambany dia ambany ny vidin'ny faktioran-jiro (tsy miresaka momba ny rivotra na lafaoro isika, izay mandany bebe kokoa).
Raha omenao ampahan'ny vola tianao laninay izahay dia afaka manampy anao tsaratsara kokoa.
15 Mey 2019 amin'ny 5:14 hariva
Misaotra indrindra amin'ny valinteninao. Adinoko tanteraka ny nanoratra ny tetibola, eo anelanelan'ny 150 ka hatramin'ny 300 euros.
16 Mey 2019 amin'ny 9:55 maraina
Manoratra aminao aho mikasika ny fanontanianao momba ny milina fanjairana hovidiana.
Koa satria tianao ho fanomezana ho an'ny olona efa manana fahalalana momba ny lamaody sy ny fanjairana, dia tsara indrindra ny miloka amin'ny modely izay manolotra karazana stitches. Noho izany, ny Alfa Pratick 9 dia iray amin'ireo kandidà tsara indrindra atolotrao ihany koa. Ary manana teti-bola be ianao raha te hanome boky fanjairana, kojakoja na ny fonony.
Raha manitatra kely kokoa ny teti-bolanao ianao, dia manana milina fanjairana elektronika Compatt 500E izay manolotra endrika stitch bebe kokoa ary ao amin'ny ligy hafa rehefa miasa miaraka aminy.
18 Jona 2019 amin'ny 11:07 maraina
Bonjour, liana aho hividy milina fanjairana manao embroidery logo na litera. Afaka milaza amiko ve ianao hoe modely inona no manao azy? Mirary ny soa indrindra
18 Jona 2019 amin'ny 11:17 maraina
Manoratra aminao aho noho ny hafatra navelanao taminay tao amin'ny tranokalanay amin'ny milina fanjairana.
Araka ny voalazanao, ny tena soso-kevitra dia ny maka milina fanjairana ho an'ny Patchwork, izy ireo no manome safidy betsaka indrindra amin'ny fanaovana peta-kofehy abidy sy sary samihafa.
Ohatra, ny Alfa Zart 01 dia kandida lehibe ary tena eny an-dalana. Afaka manao ny zava-drehetra miaraka aminy ianao.
27 septambra 2019 tamin'ny 11:49 maraina
Arahaba maraina, tiako ianao mba hanome ahy ny hevitrao momba ny milina telo izay hitako ny Practical Alpha 9 Elna 240 sy Janome 3622 na iray izay heverinao fa mety amiko, misaotra, miandry ny valinteninao aho.
10 Novambra 2019 amin'ny 10:24 hariva
Tiako ny blôginao, manampy ahy betsaka izany. Manomboka mianatra manapaka, manjaitra ary manao lamina aho satria te hanokan-tena amin'izany aho. Te-hampiasa vola amin'ny milina tsara izay maharitra ahy aho ary mahasoa indrindra amin'ny akanjo. Tsy te hihena aho, izany hoe, tsy ny tena fototra (tsy ny lafo indrindra izay tsy ilaiko) iza no soso-kevitrao?
Novambra 11, 2019 amin'ny 8:41 maraina
Izahay manokana dia manoro hevitra ny Alfa Pratik 9. Izy io dia milina fanjairana amin'ny terrain rehetra izay miasa tsara ho an'ireo mpampiasa tsy dia za-draharaha ary ireo izay efa manana fahalalana ilaina amin'ny fampiasana ny zavatra rehetra azony atao.
2 septambra 2020 amin'ny 2:59 alina
Bonjour, manana mpihira 4830c aho fa tsy mandeha tsara intsony, iza no mety hitovy marika, ilay manana toetra mitovitovy na somary ambony kokoa, amin'izao fotoana izao.Misaotra.
Manaiky ny fepetra momba ny fiainana manokana *
Tanjona momba ny angona: Fanaraha-maso ny SPAM, fitantanana ny fanehoan-kevitra.
Fifandraisana amin'ny angon-drakitra: Ny angon-drakitra dia tsy ampitaina amin'ny antoko fahatelo afa-tsy amin'ny adidy ara-dalàna.
Fitehirizana angon-drakitra: angon-drakitra nampiantranoin'ny Occentus Networks (EU)
Zo: Azonao atao ny mametra, mamerina ary mamafa ny mombamomba anao amin'ny fotoana rehetra.
Alfa milina fanjairana
Rahalahy milina fanjairana
milina fanjairana mpihira
milina fanjairana Toyota
Masinina fanjairana taloha
milina fanjairana Prime Day
milina fanjairana zoma mainty
milina fanjairana cyber monday